पार्टीको १० औं महाधिवेशनको मुखैमा आएर नेता घनश्याम भुसालले किन गरे यस्तो अपिल
नेकपा एमालेका लाखौँ सदस्यले विभाजनको पीडा र गुटबन्दीको नशाबाट हाम्रो पार्टी ब्यूँझन्छ र धुलो टकटक्याउँदै फेरि उठ्छ, विचार तथा सिद्धान्तको आधारमा अझ बढी एकताबद्ध भएर फेरि उठ्छ भन्ने भरोसाकासाथ दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ हेरिरहेका छन् । यसका समर्थक र शुभचिन्तकहरूले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेको पुनरोदयको विश्वास गरेका छन् । आफैले गरेका बाचा पूरा नगरेर मुलुकको भविष्यप्रति संवेदनहीन हुँदै गएको भनेर हामीलाई दुत्कार्ने बौद्धिकहरूको ठुलो सङ्ख्या पनि आलोचनात्मक आग्रहका साथ हामीसँग आशावादी छ । अन्य पार्टीमा रहेर पनि नेकपा एमाले मुलुकको भरपर्दो शक्तिका रूपमा पुनर्स्थापित हुँदा आफ्नै भविष्य सुरक्षित देख्ने ठुलो जनमतका आँखा पनि हामी तिरै छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासको निर्माणमा रगत पसिना बगाएका समस्त अग्रजहरूको विरासतले पनि हामीसँग अपेक्षा गरेको छ । हाम्रा सफलतामा गौरव गर्ने र हाम्रा असफलतामा दुखी हुने दुनियाँ भरीका कम्युनिष्ट, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा सामाजिक न्याय र समानताको पक्षधरहरूले हामी फेरि उठेको र सफल हुँदै अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन् । सङ्क्षेपमा, मुलुक र दुनियाँले केही भरोसा, केही विश्वास र केही आशाका साथ हामीलाई हेरिरहेको छ ।
सत्तरी वर्षदेखि नेपालको सपना लोकतान्त्रिक स्थिरता हो । तर हामीले या त अस्थिरता या निरङ्कुशता पायौँ । करिब चार वर्ष अगाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन, निर्वाचनमा असाधारण विजय, बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार, पार्टी एकीकरणजस्ता एकपछि अर्को घटनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र विश्वास जगाएको थियो । लोकतान्त्रिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समानतासहित मुलुकले नयाँ युगमा पाइला टेक्न सक्ने भएको थियो । तर गएको एक वर्षकै समयमा हामी आफैले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको संसद विघटन गर्‍यौँ, एकीकृत पार्टी विभाजित गर्‍यौँ, संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू भत्कायौँ, नेकपा एमालेको एकतासमेत बचाउन सकेनौँ र अहिले हामी आफै राजनीतिक घेराबन्दीमा परेका छौँ । सबै राजनीतिक पार्टीहरू स्वार्थ केन्द्रित गुटबन्दीको भुमरीमा फस्दै गएको, संसद राजनीतिक खिचातानीको शिकार भएको, अदालतमा विचौलियाको नियन्त्रणको पोल खुल्दै जाँदा न्याय व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको हुँदा राज्य कमजोर हुँदै गएको छ र लोकतान्त्रिक स्थिरतामाथि खतरामा पर्न थालेको छ । क्रान्तिको एउटा मुख्य शक्तिका हैसियतले यो सङ्कट हाम्रो आफ्नै सङ्कट हो ।
अगणित पुर्खाहरूले खाएका ठक्कर र पाएका उपलब्धीको लेखाजोखा नै सिद्धान्त हो । त्यसैले क्रान्तिको पहिलो ग्यारेण्टी पनि सिद्धान्त हो स् जसले हामीलाई भविष्यको बाटो देखाउँछ र गल्ती गर्नबाट जोगाउँछ । क्रान्तिका जतिसुकै राम्रा नारा लगाए पनि सिद्धान्तहीन राजनीति केवल स्वार्थहरूको प्रतिस्पर्धा बन्न जान्छ । जसरी पनि जित्ने प्रतिस्पर्धामा जसले जिते पनि राजनीति बिग्रन्छ, मुलुकले दुख पाउँछ । त्यस्तो राजनीति राज्य दोहन गर्ने थैलीशाही गुटहरूको खेलमैदान बन्छ । दलाल पुँजीवाद र भद्दा संसदवादले पार्टीलाई ती गुटहरूको खेलौना बनाउँछ । एउटा कमरेड अर्को कमरेडसँग तर्सिन्छ, एउटा कमरेडले अर्को कमरेडको खुट्टा तान्छ र अन्त्यन्त सबै सबैसँग तर्सिने र सबैले सबैको खुट्टा तान्ने अवस्था आउँछ । र, पार्टी र राजनीति झन् झन् सङ्कटग्रस्त हुँदै जान्छन् । हाम्रो पछिल्लो राजनीतिलाई नै हेरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको बहुमतले मुलुकलाई के दियो ? नेकपा माओवादीले संविधानसभामा पाएको असाधारण जित किन पानीको फोका भयो ? नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको दिग्विजयी किन भताभुङ्ग भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ केवल कुनै व्यक्ति वा तिनका गुटका दाबीमा होइन बरु कस्तो सिद्धान्त भएका पार्टीले त्यस्ता व्यक्ति वा गुट जन्माउँछन् र समाजले क्षति व्यहोर्छ भनेर खोज्नु पर्छ ।
कहाँ छ त समस्या ?`
हामीले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र समानता, रोजगारी, सुशासन, पर्यावरण, विदेश सम्बन्धमा कस्ता नीति बनाउँछौँ, कसरी लागु गर्छौँ जसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी हुन्छ भन्ने समग्र योजना नै पार्टीको आजको कार्यक्रम हो । त्यस्तो कार्यक्रम लागु गर्न पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्षदेखि हरेक सदस्यको योग्यता कस्तो हुन्छ ? तिनको योग्यताको परिक्षण कसरी हुन्छ ? आफ्नो सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले के गर्छन् ? कसरी गर्छन् ? प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले के गर्छन् रु पार्टीका नीतिहरू कसरी बनाइन्छ ? कस्ता व्यक्तिहरू पार्टी सदस्यताका लागि योग्य हुन्छन् ? कमिटीका निर्वाचन कसरी गरिन्छ ? जस्ता सबै समस्याको समाधान सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले गर्छ र त्यसका आधारमा पार्टीको विधान बन्छ । यसरी कार्यदिशा, कार्यक्रम, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधानको सङ्गतिपूर्ण पार्टी व्यवस्था बन्छ । हामीले कार्यदिशा त बनायौँ तर कार्यक्रम अझैसम्म बनाएनौँ । कार्यक्रम नबनेपछि कार्यक्रमलाई लागू गर्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधान पनि बनाइएन । अर्थात्, आज हामीले समाजवादको झण्डा त बोकेका छौँ तर कता हिँड्दै छौँ भन्ने स्वयं हामीलाई थाहा छैन । समस्याको जरो यहीँ छ ।
उपरोक्त असङ्गतिले गर्दा संसद, पार्टी, सरकार र राजनीतिले एकपछि अर्को धक्का खाँदै गयो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास वा समाजवादको बुझाई व्यक्ति पिच्छे फरक भए । गएको ८र९ वर्ष पार्टीको नीति–कार्यक्रममाथि कुनै प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना भएन । विचाररसिद्धान्त वा मार्क्सवाद वा जनताको बहुदलीय जनवादमाथि कुनै गतिलो चर्चासमेत भएन । दलाल पुँजी वा राष्ट्रिय पुँजी के हो ? दलाल पुँजीसँग को लड्छ ? कसरी लडिन्छ ? समाजवादको तयारी भनेको के हो ? त्यसका लागि कसले के गर्नु पर्ने हो ? सिद्धान्त निर्माण गर्ने विधि के हो ? सिद्धान्त कसले बनाउँछ ? कसरी बनाउँछ ? जस्ता प्रश्न नै उठ्न छोडे । त्यसले पार्टी पङ्क्तिले के ठिक वा के गलत हो भनेर विश्लेषण सकेन । अराजकता र गुटबन्दी बढ्दै गयो । नेताहरूका स्वार्थको छद्म युद्धमा पार्टी फस्यो । त्यहि छद्म युद्धमा संसद विघटन, पार्टी विभाजन, सरकारहरूको विघटन हुँदै गयो । किटानीका साथ के भन्न सकिन्छ भने यदि यी कमजोरीलाई नसुधार्ने हो भने गल्ती दोहरिँदै जानेछन् र समयले हामीसँग चर्को ब्याजका साथ सिद्धान्तमा खेलबाडको मूल्य चुक्ता गर्नेछ ।
जसरी ज्ञान–विज्ञानका उपलब्धी कुनै राष्ट्र वा जातीका सम्पत्ति हुँदैनन्, त्यसैगरी पार्टीका सिद्धान्तहरू कुनै गुट वा समूहका हुँदैनन् । जेसुकै कारणले होस्, हामीले दशौँ महाधिवेशनमा यी विषयमा आवश्यक छलफल गर्न नसक्ने भयौँ । तर पार्टीका सिद्धान्तहरूको निर्माणमा अगाडि रहेर करिब दुई दशकदेखि क्रियाशील सदस्यको हिसाबले मेरो के दाबी छ भने नेकपा एमालेको पुनरोदयका लागि ती असङ्गति हटाउनै पर्नेछ, त्यसका आधारमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नै पर्नेछ । त्यसैले, सबै प्रतिनिधि समक्ष मेरो अपील छ ः दशौँ महाधिवेशनले कम्तिमा पनि दलाल पुँजीवादको विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने ठोस कार्यक्रमका बनाउन सङ्कल्प गरोस् ।